- नेपाली सन्देश आइतवार, साउन ६, २०७५ , 6.1K जनाले हेर्नुभयो
नेपालमा नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिँदा, सामाजिक कल्याणको पक्षमा कोही उभिँदा, स्वतन्त्रताको पक्षमा कोही उभिँदा सत्ताधारीले जहिले पनि केही न केही भन्ने गरेका छन् । शाही पञ्चायतकालमा अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रको फौजी शासनमा कहिँ कतैबाट निर्देशित भनिन्थ्यो । अहिले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको पक्षमा हामी बोलिरहेका छौं । हामीलाई कोही कसैबाट सञ्चालित, कांग्रेसबाट सञ्चालित भनिरहेका छन् । जसले भनिरहेका छन्, ती अधिकारको संघर्षबाटै आएका थिए । आज म तपाईँहरुको अगाडि डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरिदेउ भनेर ओलीको अगाडि निवेदन गर्न आएको होइन । डा. केसी सन्त हुनुहुन्छ, जोगी हुनुहुन्छ । उहाँ यो भन्दा माथि हुनुहुन्छ । डा. केसी यसै पनि अमर भइसक्नुभएको छ ।
कमरेडहरु श्रीमान खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाललाई तिमी आफ्नो नाक जोगाउ भन्न आएको हुँ । अहिलेको सरकार खड्गप्रसाद ओलीको सरकार लगभग चार महिना बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रको फौजी सरकारको स्मरण गराएको छ । डा. केसी सत्याग्रही हुनुहन्छ । डा. केसीले अघि सारेका जे जस्ता माग रहेका छन् । ती नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ डोर्याउने मागहरु हुन् ।
आफूलाई जनवादी भन्नेहरु आफूलाई समाजवादी भन्नेहरु डा. केसीमाथि अपराधीको रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । अस्पतालभित्र लाठी चार्ज गरिन्छ । अस्पतालमा गोली चलाइन्छ । सत्याग्रही सन्त केसीलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याइन्छ । काठमाडौं ल्याएपछि सरकार केसीसँग वार्ता गर्ने विषयमा केही पनि भन्दैन । के यो ओली सरकार डा. केसीको मृत्युको प्रतिक्षामा छ ? यो कुनै सजिलो कुरा होइन । बितेको एक महिनाको बीचमा ओली सरकार अलोकप्रिय भएको छ ।
खड्गप्रसाद ओलीले के गर्नभयो दुईवटा बुलेटप्रुफ गाडी हुँदाहुँदै आफूलार्इ राजाजस्तो देखाउन थप दुईवटा बुलेटप्रुफ मर्सिडिज माग गर्नुभयो । ओलीको कार्बन कपीको रुपमा आएका पर्यटनमन्त्री अधिकारी ६० करोड भरौटेहरुलाई बाँड्नुभयो ।
सडक आम नागरिकको हो । नागरिकले आफ्ना मत व्यक्त गर्ने सडकमा पनि खड्गप्रसाद ओलीले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो । हामीलाई रत्नमार्पकमा उभिने अधिकार छैन । मण्डलामा उभिने अधिकार थिएन । ज्ञानेन्द्रको फौजी कालमा मात्रै यस्तो भएको थियो । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले आफ्नो इतिहासको याद गरुन् । चुनावमा जाँदा जनताको पक्षमा गरेका कबोलको याद गरुन् । आफैं माफियाको दलालको रुपमा र आफैं चिकित्सा सेवाको व्यापारीको रुपमा उभिएर नाक काटेका छन् । तिनले आफ्नो नाकको उपचार गरे हुन्छ ।
डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने के हुन्छ ? मलाई थाहा छैन । महाराज ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ । केसीप्रति व्यवहार गरिहँदा ओली र दाहालको सरकारले नागरिक हकको विरुद्धमा उभिँदा सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिन खोज्दा ज्ञानेन्द्रको के हालत भयो खड्गप्रसाद ओलीको पनि नियति त्यही हुनेछ ।
डा. केसी यसै पनि अमर हुनुहुन्छ । ओलीले जीवन रक्षा गरिदिनुपदैन । डा. केसीको माग पूरा गरुन् ।
(शनिबार डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दबाबस्वरुप आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संग्रौलाले राखेका धारणाको सम्पादित अंश)